BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 9 / Activity 1
Har’a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu ‘go the extra mile’ ‘maayilii dabalataa deemuu’ jedhu ni barana. Maal jechuudha jette yaada? Wal’aaltee? Tole ittifufii caqasi.
Fiifiin konkolaataashiitii Finn gara hojiitti geessuutti jirti. Mee waan isaan walitti haasa’an caqasnee haa hubbannu.
Fifiin konkolaataa haaraa bituu akka feetu Finitti himte. Sababiin isaa konkolaataanshii dulloomuusaarraa kanka’e yeroo heddu ogeessa/mekaanikiitti bilbiluutu irra ture. Maallaqashii qusachuuf yaalaa jirti. Haata’uutii Fnin waantota muraasa dhiisu akka qabdu itti himaa jira. Maal akka ta’an dhageessee? Eeyee, wa’ee mana nyaataa gatii mi’aafi ayyaana gati olaanaa ishee baasisan akka dhiiftuudha. Feeyfeeyn waa’ee waantoota kanneen dhaabu waan isheen jettu haa dhageenu.
In English, when you tell someone to 'go the extra mile', you're telling them to make more effort than usual to achieve their objectives.
Fiifiin hatattamaan maallaqa qusachuu yoo feete, ‘go the extra mile’ jechuun Finn itti dubbate ‘go’ jechuun deemuudha, ‘extra’ jechuun dabalata, akkasumas ‘mile’ jechuun maayiliidha. Waan fageenya ibsuuf iti fayyadamanii. Kana jechuun waan barbaadu argachuuf ykn kaayyookee galmaan gahuuf waan dura gooturraa carraaqqi dabalata taasisuu jechuudha. Jechi ijoon tari ‘perhaps’ kan jedhu ta’u mala sababiinsaa faggeenya idilee ademamaa turerraa daran faggeenya dabalata deemu jechuudha. Kanaafu fageenya yeroo hundumaa deemturraa faggeenya dabalataa deemta. Waan baran caalaa yoo imalan bakka kaayyefatan dafanii gahu. Fakkeenyawwan muraasa haa caqasnu.
Dansa, maayilii badalataa deemuu jechuun eegaa Fiifiin kan jaallatu akka dhiiftu kan ishee dirqu fakkaata. Uffannaa gatii mi’aa, maashinaa babbareedoofi bashannana sanbattanii paarisitti dabarsitu utuu hinjaalatin hafu qabu. Sababni isaas maalaqa qusachuuf ‘go the extra mile’ gochuu qabdi. Jechoota Afaan Ingliziin of ibsuuf si fayyadan English Expressions dabalataaf yeroo itti aanu walitti deebina.
Gaalicha jecha waliin fayyadamuu qabda; jechi kunis waan idileerratti daran dabaluu jechuudha.
Hiikni gaalichaa kan yeroo mara godhamurratti carraaqii dabalataa taasisuu akka ta’e yaadadhu.
Jecha ‘for’ booda ‘go' jennee ‘…’ fayyadamuu qabna.
nama konkolaataan nama gaggeessu argachuu